Agrotrade 20! Ganacsiga Calaamaysan ee Tayada - Nidaamka baradhada
Taariikhda Agrotrade ayaa si aan kala sooc lahayn loola xiriirinayaa taariikhda warshadaha baradhada oo dhan ee casriga Ruushka. Shirkadani waxay u muuqatay waqti markii xiisaha baradhada ee suuqa uu soo toosi jiray kaliya, waxay fududeysay gelitaanka teknoolojiyadda horusocodka ah iyo tikniyoolajiyadda casriga ah suuqa Ruushka, waxayna goob joog ka ahayd (badanaana ka qeyb qaadatay) sameynta ugu wanaagsan.
Waxyaabaha ku saabsan jawiga ay shirkaddu u dabaaldegayso sannad-guurada, sida ay u qiimeyneyso xaaladda suuqa uu hadda ku sugan yahay iyo waxay qorsheyneysaa - wareysi lala yeeshay madaxa shirkadda Sergey Khavanov.
Ku saabsan taariikhda, howlgalka iyo xiriirka aadanaha
- Sergey Viktorovich, sideed u dejin laheyd himilada muddada fog (himilada) shaqada shirkadda Agrotrade Group ee Shirkadaha (hadaadan tixgelin siinin xisaabta)?
Xaqiiqdii anigu ma jecli erayga "ergo", fikradeyda, waxay u muuqataa cilado aad u badan. Waxaa jira riyooyin waxaana jira wado aan dooranay. Markii aan ku soconay dariiqaan, waxaan isku dayeynaa inaan fahamno doorkeena iyo ujeedkeena.
Laga soo bilaabo bilowgii aasaasida shirkadda, oo uu weheliyo saaxiibkay ganacsade Dmitry Kabanov, shaki kuma jirin waxa ay shirkadeennu samayn doonto. Waxaa jiray aragti guud oo ku saabsan kartida iyo fursadaha ka furmay beeraha wakhtigaas, gaar ahaan kobcinta baradho. Waxaa la sameeyay horaantii 2000-meeyadii, markii aan Jarmalka wada booqanay. Markii aan booqanay dukaamada waaweyn ee Yurub oo leh khudaar tayo sare leh xirmooyin kala duwan, waxaan go'aansanay inaanan xumaan doonin. Oo waxay bilaabeen inay ficil sameeyaan.
Waxaan ku bilownay iibinta barandhada iyo khudradda suuqyada jumladaha yaryar, laakiin ugu dhakhsaha badan waxaan gaarnay in rajada weyn ee shirkaddu ka furi doonto horumarinta kanaalka iibka iyada oo loo marayo silsiladda tafaariiqda. Oo mar horeba 2002, waxay noqdeen alaab-qeybiyeyaasha gaarka ah ee shabakada gobolka Nizhny Novgorod ee "Isbahaysiga". Markii aan helnay khibrad ku saabsan dhammaystirka iyo xiridda agabka ceyriinka ah, 2006dii kooxdeennu waxay aadeen heer federaal iyagoo wata baradhada baakaysan, saddex sano gudahoodna waxay noqotay iibiyaha guud ee baradhada Metro Group.
Xiriir dhow oo lala yeesho silsiladaha tafaariiqda iyo macaamiisha ugu dambeysa waxay wanaajiyeen fahamkeenna agab tayo sare leh, oo aan u beddelay fikradda horumarinta isku-dhafan ee soo-saarka iyo tikniyoolajiyada kaydinta. Sannadkii 2006, ma aannu siin oo keliya daraasiin beeraha ah abuur iyo qaab badbaadin, laakiin sidoo kale waxaannu siinnay qalab iyo keydin, dhismeyaal iyo casriyeynno casriyeysan oo leh kontoroolka cimilada otomaatigga ah, waxaanan bixinnay taageero farsamo iyo teknoloji.
Laga soo bilaabo 2008, waxaan bilownay inaan tijaabinno dhammaan walxaha teknolojiyada oo qayb ka ah mashruucanyada Agrosfera u gaar ah, taasoo markii dambe noqotay goob loogu talagalay soosaaridda farriin abuur shahaado oo dhalasho sare leh oo kala duwan oo baradho Jarmal iyo Dutch.
Sanadkii 2010, anaga oo cashar adag ka qaadanay qaabka guud ee abaarta, waxaan si firfircoon u dejinay wareejinta waxsoosaarka baradhokeena waraabka aan dabiiciga aheyn. Markii aan helnay natiijooyin aad u wanaagsan (oo aan laba-laabnay dhalidda), waxaan bilownay inaan bilowno waraabinta la-hawlgalayaasha.
Sannadkii 2014, waxaan ku guuleysanay inaan dhisno moodal shaqeynaya oo qiimo-jaban, kaas oo aan ugu magacdarnay "Nidaamka Baradhadu". Waxaa ka mid ahaa qaybinta abuur, shirkad soosaar baradho miiska, bakhaar bakhaar, baakad baakad, iib iyo alaabada saadka, iyo qandaraasyo muddada dheer ah oo ay la galeen silsilado tafaariiqda iyo noocyo gaar ah oo loo yaqaan "Qudaar qudaar ah" iyo "Xulashada dabiiciga ah". Qaabkani wuxuu ku habboon yahay oo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad miisaamiso wax soo saarka baradhada iyada oo aan la gelin halista lumista tayada iyo hufnaanta dhaqaalaha.
Horumarinta cutubkeena wax soo saarka, waxaan horteena ku aragnay labo hadaf. Tan ugu horreysa waa in dadka reer magaalka ah la siiyo wax soo saarka ugu fiican ee ku jira baakadaha ku habboon 365 maalmood sanadkii. Ta labaad waa wareejinta macaamiisheena macaamiisha ugu wanaagsan, teknoolojiyadda si wanaagsan u horumarsan soosaarka, kaydinta iyo u diyaarinta iibinta iibsiga ee baradho tayo leh.
Isla mar ahaantaana, xiriirka aadanaha had iyo goor wuxuu safka hore innaga hayaa. Waxaan had iyo jeer ka go'an nahay iskaashi muddo-dheer, xitaa haddii xaaladaha qaarkood tani ay horseeddo khasaaro faa'iido xeeladeed. Waxaan aad u qiimeyneynaa sumcaddayada aad u badan, iyo waqtiyo adag oo Shirkadda ah, qaabkani wuxuu iska dhigaa laftiisa: wada-hawlgalayaasha ayaa nagu taageeraya gadaal.
Shirkadda waxay leedahay howl kale oo muhiim ah - si loo muujiyo suurtagalnimada shaqaalaheeda. Waxaan si xoogan ugu qanacsanahay in iyada oo aan waxtar la'ahayn, mas'uul ah oo shaqaale hufan leh, dhaq-dhaqaaqa ganacsi ee muddada dheer aan macquul aheyn. Sidaa darteed, waxaan ku dadaaleynaa inaan soo jiidanno dadka doonaya inay horumariyaan oo isku dayaan inay abuuraan shuruudo ku saabsan horumarkooda.
Mashaariic muhiim ah
- Nooga warran mashruucyada ugu muhiimsan ee Shirkadda Agrotrade Group ee Shirkadaha.
Mashruuca ugu weyn annaga ayaa ah "Agrosphere", waxaan ku dadaalnay 15 sano. Ilaa iyo 2017, beeruhu mashruucan waxay qayb ka ahaayeen haynta AFG.
Laakiin kamaan qaybgalin fikradda soo-saarkii baradhada abuurkeena. Sannadka 2018, waxaan mar labaad ku hirgelinay iyada oo ku saleysan beero AgroAlliance-NN. Hada mashruucu wali waa marxalad marka "dhagxaan waaweyn" lagu dhigayo teknolojiyada, laakiin waxaan aaminsanahay mustaqbalkiisa weyn.
Haddii aan ka hadalno mashaariicda macaamiisha, waxaan sidoo kale haysannaa wax aan ku faani karno. Muddo sanado ah, Agrotrade Group waxay kaqeybqaadatey horumarinta iyo in ka badan seddex boqol oo mashruuc khudradda iyo baradho ah laga soo bilaabo Bryansk ilaa Ural, laga bilaabo Astrakhan ilaa Veliky Novgorod.
Kuwa ugu hamiga iyo xusuusta badan, dabcan, waa mashaariicdii 2004-2008, markii, indhahayaga hortooda, beero daaqsimeed ka dib markii dib-u-farsamaynta qalabka loo beddelay qabashada beeraha. Tusaalooyin dhalaalaya: Beeraha Bogomaz (gobolka Bryansk), shirkadda Maxim Gorky (gobolka Tula), Latkin LLC (gobolka Nizhny Novgorod).
Sidoo kale muhiimad weyn bay noo lahayd: mashruuca dhameystiran ee 2017-18 “A7 Agro” (gobolka Orenburg), mashruuca ugu weyn ee 2019 ee ku saabsan xirmada qalabka ee shirkadda "Jacques" (gobolka Tula), mashaariicda adag ee LLC Zhniva (Nizhny Novgorod gobolka) iyo LLC "Kostroma Potato" (Gobolka Kostroma).
Way adagtahay in hal waraysi lagu qoro qof kasta oo aan la shaqeynay oo aan sii wadnay iskaashiga. Laakiin anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dhammaan macaamiisha iyo shuraakada kalsoonida iyo kaalmaynta dhismaha shirkadeena.
- Dhammaan mashaariicda waxay la xiriiraan baradhada?
Dhamaan waxyaabaha kor ku xusan waa haa. Laakiin awoodaheenna kuma eka keliya soosaarista baradho iyo xitaa khudradda. Markaa, LLC oo suurtagal ah, oo ay weheliso dooxada dooxada iyo unugyada dhismaha ee Agrosave, ayaa ka fulinaya daraasiin mashruucyo waraab oo beeraha ah oo ka mid ah Degmooyinka Volga ee ku takhasusay soosaarka galleyda iyo soybean.
Iyo mashruuca Agrotrade Technicom, oo si gaar ah loo abuuray 2011 oo hoos yimaada magaca John Deere, oo helay sideed sano oo khibrad ah oo ku saabsan horyaalnimada farsamada ee ugu sareysa, wuxuu si firfircoon u kobcinayaa iibinta JCB iyo Kuhn, iyo sidoo kale inay isku dayaan inay gacanteeda ku horumariyaan sumcadda Yurub ee weli caan ku ah SDF oo leh khad cagaaran oo isku dardaraya kuwa goosashada.
Noocyo tayo sare leh
- Shirkadda Agrotrade waa ganacsade ku iibiya dhowr nooc oo caan ka ah adduunka beeraha. Ma dhihi kartaa sababta aad ula shaqeyneyso soo-saareyaashan?
Qayb muhiim ah oo ka mid ah howlaha Shirkadda waxay ka kooban tahay qandaraasleyda ganacsadaha. Waxaan iskaashi la sameyneynaa badeecado caan ah, dhammaantoodna waxay ku mideysan yihiin alaab tayo sare leh.
Tayada annaga ayaa had iyo jeer ka sarreeysa qiimaha, qaanuunka aan qornayn ee shirkadeena ayaa leh: "Waxaa ka wanaagsan in dhibaatooyin la kulmo marka la iibinayo marka loo eego dhibaatooyinka iibka kadib".
- Shirkadda si joogto ah ayey u kobcaysaa. Sidee u go'aamisaa vector-yada dhaqdhaqaaqa lagama maarmaanka ah?
20 sano ka hor, waxaan u xushay warshadaha baradhada mid muhiim ah, ilaa maantana waxan horumarinaynaa si wada jir ah. Baahida warshadaha iyo macaamiisha ayaa sameysa istiraatiijiyadeena wax soo saarka.
Marka, maanta dareenka suuqa ayaa diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira iibinta alaabada la dhammeeyay (oo ay ku jiraan mabaadi'da abaabulka diyaarinta iibinta barandhada iyo khudradda). 15-kii sano ee aan soo aragnay waaxdan ayaa hadda baahi weyn laga qabaa.
Qeybta wax ka baaraandegu ma ahan mid ka hooseysa khusaysa, khubaradeenna ayaa darsanaya tikniyoolajiyadda ugu yabooha badan si ay macaamiisha ugu siiyaan sida ugu wanaagsan.
Dadaallada shirkadaha ugu guulaha badan ee warshadaha ayaa hada loogu talagalay in lagu yareeyo qiimaha wax soo saarka. Saxnimada isticmaalka kheyraadka (waana tan qiyaasta saxda ah ee bacrimiyeyaasha loogu talagalay dalagga la siinayo, iyo abuuridda saxda ah ee abuurka, iyo isticmaalka saxda ah ee kimistariga iyo biyaha, iyo dhaqaalaha shidaalka) ayaa muhiim u ah kor u qaadista kartida. Oo waxaan raadineynaa fursado aan kaga caawino macaamiisha horumarka iyo hirgelinta qalabka iyo teknolojiyadda lagama maarmaanka u ah.
Tartan. Iyada oo ay ku jiraan badarka iyo baastada
- Beeraley badan ayaa ka cawda in ay faa iido u leedahay in la beero baradho. Ma ku raacsan tahay fikradan?
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan si aad ah ugu sii kordheynaa inaan ka hadalno isbadalka suuqa baradhada. Baradho fara badan ayaa dalka laga soo saaray, in dakhliga laga helo iibkiisa uu sii adkaanayo. Fikradeyda, dhibaatada qayb ahaan waxay ku saleysan tahay xaqiiqda in weli ay jiraan shirkado aad u yar oo ka fikiraya tayada badeecadooda.
Maxuu baradho la tartama suuqa? Iyada oo ay ku jiraan badarka iyo baastada. Waa in la oggolaado in labada soo-saare ay qabteen howlo badan tan iyo markii ay yaraayeen 90-meeyadii. Dukaammada ayaa bixiya alaabo aad u badan oo kaladuwan: badar, dhaqameed iyo qalaad; baastada nooc kasta, oo ka samaysan fasallo kala duwan oo bur ah; baakadaynta dhadhan kasta - laga bilaabo 0,5 kg illaa 5 kg. Iyo shaqaalaha ku hawlan samaynta, dheh, Boorash shiidan ayaa aad u yar: hadda xitaa dalagyada ugu jaban uma baahna in la kala saaro.
Oo waa maxay baradhada? Waa in la dhaqo oo la nadiifiyo (isagoo lumiyay waqti kaliya, laakiin qayb wanaagsan oo la iibsaday). Hadana haddii sheygu aanu tayo aad u sarreyn, khasaaraha wuxuu gaari karaa 30-40%. Qofka wax iibsadaa miyaa doonaya inuu iibsado baradhada mar labaad tan ka dib? Waxaan u maleynayaa taasi goor dhow. Fritz Borg, oo ah agaasimihii hore ee ganacsiga ee GRIMME, wuxuu jeclaan lahaa inuu ku celiyo in soosaarayaasha baradho tayo hooseeya ay ka caawiyaan soo saarayaasha dalagyada.
Waa muhiim in la fahmo in kaliya wax soo saar tayo leh mustaqbalka fog faa'iido laga yeelan karo, maxaa yeelay waa sameynta macaamiisha joogtada ah.
Baradhadu waa dalag beereed
- Waa maxay sirta soo saarista baradhada tayada leh? Miyayna suurtagal ahayn in la helo tiro iyo tayo labadaba mar?
Marka loo eego aragtidayda, beeruhu waxay leeyihiin fursado badan oo ay ku soo saaraan wax soo saar tayo sare leh. Xaqiiqdu waxay tahay in baradhaduhu ay yihiin dhaqan aad u adag oo soo koraya, waxay u baahan tahay feejignaan iyo dadaal joogto ah labadaba cilmi nafsiga iyo madaxa shirkada. Mararka qaarkood go'aan ayaa loo baahan yahay in si dhakhso leh loo gaadho, kiisaska noocaas ahna, beeraha yar yar waxay ka faa'iidaan dabacsanaantooda.
Haystaha beeruhu waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda aan laga fiirsan karin: waxay iibsan karaan agabyada ka ilaaliya dhirta, shidaalka, bacrimiyeyaasha baaxadda weyn ee qiimaha tartamada; waxay awoodaan inay aasaasaan alaabada joogtada ah ee alaabada ilaa bakhaarada sanadka oo dhan, taas oo aad looga mahadcelinayo silsiladaha tafaariiqda. Laakiin way adagtahay in loola dagaallamo tayada meelaha waaweyn: soosaarka khadka tooska ah, ma iska ilaalin kartid tiro badan oo kala soocid ama dhaawacyada qulqulaha sare inta lagu jiro goosashada.
Ganacsiga baradhada si fiican uma qiyaaso. Isla mar ahaantaana, iskaashatada beeraleyda ayaa noqon kara xalka suurtagalka ah: beeraha yaryar, oo ku midoobay marxaladaha iibinta iibka iyo kaydinta, waxay awoodi doonaan inay la falgalaan silsiladaha tafaariiqda ee shuruudaha ku habboon naftooda. Run, fikradda midaynta ayaan wali caan ka ahayn deegaanka beero-xoolaadka. Sida muuqata, waqtiyo aad u adag ayaa ah inay yimaadaan si kuwa takhasuska leh, oo mar ka tagay beeraha wadaagga ah iyo beeraha dawladdu, ay ogaadeen faa'iidooyinka wada shaqeynta.
Faa'iidadu waxay kuxirantahay xirfad ahaanta
- Waxaan ka hadleynay uun qalalaasaha ka jira warshadaha.
Arinka badbaadada wali ajandaha lagama gaarin. Haa, faa'iidooyinka ayaa hoos u dhacay, inbadanna fursad uma helaan inay maalgashadaan mustaqbalka, maalgashi ku sameeyaan horumarka, laakiin baradhada ayaa wali ah dalag qiimo badan leh. Qaado, tusaale ahaan, xilli-sannadeedka 2019/20. Xilliga deyrta iyo jiilaalka oo dhan, qiimuhu aad ayuu u yaraa, mararka qaar wuu ka yaraa qiimihii, laakiin bishii Maarso waxaa soo booday, badeecaduna saddex laab. Kuwii sugayay daqiiqadani, waxay alaabtooda ku iibiyaan si faa'iido leh.
Ma jiraan wax ka sarreeya oo muuqaalkan ah; waxa lagu soo celiyay tobankiiba siddeed kiis. Beeraleyda baradhada ee hela wax soo saar tayo sare leh oo yaqaana sida loo kaydiyo illaa guga, sida caadiga ah, faa iidada, iyo tusaalahoodu aad bay noo dhiirigelinayaan - dareen ahaan inay sax u tahay teknoolojiyadda iyo xalalka aan soo saareyno ee u oggolaanaya beeraleyda inay ku sii nagaadaan madowga. .
Arrin kale ayaa ah in boodhkan uu ahaa mid si muuqata looga dareemay sidii caadiga ahayd, oo laga yaabo inuu si xun saameyn ugu yeesho suuqa. Qaar ka mid ah shirkadaha ka hortagi jiray dib u dhaca sicirka iibka ee hooseeya iyo qiimaha kor u kaca wax soo saarka - waxay diyaar u ahaayeen inay beddelaan sumcadooda wax soo saarka, iyagoo sameeya faa'iidooyin aan la fileynin, isku day mar kale inay "hoos u dhigaan" xilli ciyaareedka soo socda waxaana loo dammaanad qaadayaa inay "hoos udhacaan" qiimaha.
"Laakiin wali suurtagal ma tahay in lagu guuleysto?"
Digaaga baradhada maanta waa ganacsi u baahan xirfad heer sare ah. Beeraleydaas wax kasta oo saxda ah sameeya waxay helaan daqli xitaa xaaladaha shuruudaha guud. Haddii celceliska dhalidda ay ka sarreeyaan 50 t / ha, qiimaha 8-10 rubles / kg wuxuu caddeyn u yahay maalgashiga oo dhan. Su’aashu waxay tahay sidee lagu gaari karaa natiijadan oo kale? In kabadan labaatan sano oo shaqo ah, waxaan helnay ikhtiyaaro badan oo lagu xaliyo dhibaatadan waxaanan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano raadinta jawaab - qofkasta oo inaga oo kale ah, “jiran” oo baradho ah qaab wanaagsan una rumeeya rajadiisa.
Shirkadda Agrotrade waxaa lagu aasaasay sanadkii 2000 magaalada Nizhny Novgorod.
Sanadihii la soo dhaafay, wuxuu ku koray Agrotrade Group of Shirkadaha, kaas oo isku daraya shirkadda waalidka, LLC Agrotrade Company, iyo sidoo kale LLC Agrotrade Technicom, LLC Agrosave, LLC Suurtogal, LLC AgroAlliance-NN.
Waxay ku takhasustay sahayda baaxadda leh ee soosaarayaasha beeraha leh ilaha lagama maarmaanka u ah: mashiinada beeraha, waraabka iyo qalabka kaydinta, baradhada abuurkooda, soosaarka dhirta, iwm. Waxay fulisaa mashaariicda dhismaha iyo dib u dhiska khudradda iyo baradhada. Iibiyaha shirkadaha adduunka hogaamiya.
Khabiirada Agrotrade ee loo soo diray Ruushka waxayna hawlgabeen in ka badan 1700 qalabka GRIMME ee shirkadaha wax soosaarka beeraha; daraasiin ka mid ah kuwa goosanaya for goosashada karootada, xididdo iyo basasha ASA LIFT; boqolaal qashin qodaya, kuwa wax toosa oo wax garaaca, kuwa wax basaasa KUHN; daraasiin ka mid ah kuwa u shaqeeya HARDI iyo abuurka AGRICOLA ITALIANO. In kabadan 150 xarumood oo bakhaar casri ah iyo 12 mashruuc oo waraab oo adag ayaa la hirgaliyay; waxay rakibteen in kabadan 200 doorood baahin balaaran iyo 30 waraabiyayaal waraabinta Nettuno. Wadarta dhulka la soo celiyay iyadoo la kaashanayo shirkadda Agrotrade Group ee Shirkadaha ayaa kor u dhaaftay 10 kun oo hektar.
Tags: 2020 .2Shirkadaha "Agrotrade"tikniyoolajiyadda cusubhorumarinta warshadaha baradhada